JobDescriptionSample.org - စာမျက်နှာ2၏ 99 - ယောဘသည်ဖျေါပွခကျြ၏ကြီးမားစုဆောင်းမှု
မှရပ်စဲ၏လက်ကိုင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များကိုစီမံခန့်ခွဲ, အန္တရာယ်မကင်းဖြစ်ကြောင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်မဲ့, နှိပျစသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း. အလုပ်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သပိတ်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရက်စက်မှုများ၏အစီရင်ခံစာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, သကျသခေံရှာတွေ့, စာစုဆောငျးသက်သေအထောက်အထား, နှင့်အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်. သွေစံချိန်နှင့်ဖယ်ရှား, ကမြင်းကြော, သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများကနေတိရိစ္ဆာန်များနှိပျစ, …
အလုပ်သမားများကြိတ်ပြီးတော့ Polishing, လက်ကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်, သဲ, သို့မဟုတ်ထွန်းလင်း, လက် tools များသို့မဟုတ်လက်-ကျင်းပအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းလျှောက်ထား, စွမ်းအင်စက်ကိရိယာများ, ကျွန်းသစ်, ကြောကျ, ရွှံ့, စျေးပေါ, သို့မဟုတ်ဖန်ပစ္စည်းများ. chippers ကပါဝင်ပတ်သက်, ကြားခံ, နှင့်ကာပြီးမြောက်. Career Skills Qualification Mud, အလုပ်, ဖြေရှင်းမည်, သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ပင်ထပ်မံဖြည့်စွက်အဘို့ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ထားရန်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဒေသများမြှင့်တင်ရန်, using palm tools …
ဖျော်ယမကာစပ်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty Template ကို
ဖောက်သည်စေားရောနှောနေခြင်းနှင့်ပေး, ညာဘက်သို့မဟုတ် waitstaff မှတဆင့်. Career Skills Qualification Acquire funds for products supported. အရက်များဝယ်ယူဘို့အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်များ authenticate မှစျေးဝယ်၏အိုင်ဒီကိုစိစစ်ရန်. တည်ငြိမ်မှုဝင်ငွေထုတ်ပြန်ချက်များ. စျေးဝယ်နိုင်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဒုက္ခနှင့်တာဝန်ကန့်သတ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်း Make’ extreme drinking by taking actions for …
Terrazzo Workers And Finishers Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့ Functions များ
Implementacombination of concrete, သဲ, အရောင်, or pebble chips to flooring, staircases, and case accessories to trend surfaces that are sturdy and cosmetic. Career Skills Need Minimize material department strips and push these in to the terrazzo foundation for bones or changes of coloring to form styles or designs …
Correctional Officers And Jailers Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
Airfield Operations Specialists Job Description / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
Orderlies Job Description / Tasks ကိုထိုအ Duty နမူနာ
Transport people to areas such as managing bedrooms or xray bedrooms applying stretchers wheelchairs, or moveable mattresses beds. May retain futures of materials or clear and carry products. Job Skills Prerequisite Solution individual call techniques, transmission lamps or alerts to determine peopleA requires. Have information or paperwork between divisions. adjust …
Laundry And Dry-Cleaning Workers Job Description / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ခံမှု Template ကို
Work or tend cleaning or drycleaning models dry-clean or to wash home or business content, including textile apparel buckskin, furs blinds, စာရွက်များ, rugs , and carpets. Incorporates spotters of the content. Career Skills Qualification Receive and level content for washing or drycleaning using pinpointing code amounts or names, applying appliance …
Forest Firefighters Job Description / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
စာမျက်နှာ2၏ 99«12345 » 102030...နောက်ဆုံး »